Kyrgyzstan Mutevedzeri wegurukota rezve Ruzivo ne Tourism anosiya basa
Location: musha » Kutumira » Kuputsa Kufamba Nhau » Kyrgyzstan Mutevedzeri wegurukota rezve Ruzivo ne Tourism anosiya basa
Ainura Temirbekova akasiya chinzvimbo cheMutevedzeri wegurukota rezvetsika, ruzivo uye Tourism yeKyrgyzstan sekutumira kwake paFacebook.
Maererano naye, ichi chisarudzo chemaune. Ainura Temirbekova akatenda munhu wese nerubatsiro uye kushandira pamwe uye akataura chikonzero chekurega kwake.
«Inguva yekugadzira nzvimbo yenzira nyowani, mazano, nemikana. Ini ndakavhurika kushandira pamwe mune chero nzvimbo uye ndinovavarira kuramba ndichishandira nyika yedu inoshamisa, Kyrgyzstan nevanhu vayo vanoshamisa, »akadaro Ainura Temirbekova.
Akawedzera kuti akashanda achitungamirwa nevatungamiriri vakati wandei vehurumende, vatevedzeri vemakurukota nemakurukota, nevatevedzeri vemisangano miviri yeParamende kweanopfuura makore mashanu.
ruzivo Kijisitani Paramende ushanyi
Air Asia inotengesa ndege makumi maviri nemapfumbamwe chete kuti idzose izvozvi
Kushandisa Kisimusi muKilimanjaro, pasi peDenga reAfrica